Nke a nchọgharị ga-arụ ọrụ nnọọ mma karịa ndị ọzọ: Ọ bụ kpu ufọk ufene.
Firefox (-ahụ n'ihu n'okpuru banyere addons) – 10/10
Firefox, ezie na ọ bụghị dị ka populare dị ka Google Chrome, ka bụ Eze nke customization. Ọ bụ a nso nke abụọ m.
M na-eji KeePass na-m okwuntughe zọpụta, ezoro ezo, echekwara na mpụga nke 3rd ọzọ akara.
Oké Mkpa anọchi Dropbox. Ọ bụ freemium – though I don’t have a pressing need to use the Pro Edition, ma ọ bụrụ na m mere na m agaghị ala azụ kwụọ ụgwọ ya.
Olee ebe ọzọ ị ga-n'ọba akwụkwọ nke egwuregwu?
Nke a bụ a Windows ngwá ọrụ iji nyere serialise oyiri / aga arụmọrụ. M kwagara n'ebe ya mgbe TeraCopy nwere na-agbanwe agbanwe okwu na 64bit. It only loses points for having a cluttered UX
Mmebi Canary – 9/10
A mma n'anya na di ntakiri Adon na Imea na-agwa gị ma ọ bụrụ na SSL akwụkwọ maka saịtị na ị na-ugbu a na-ele na-adịghị anya aga-ekubi ume. Ọ bụrụ na gị onwe gị na saịtị a nwere ihe SSL akwụkwọ, M nwere ike ikwu na ị na-eji nke a Adon na Imea Iji nyere gị na saịtị ahụ si SSL akwụkwọ ekubie ume ruru ka a dị mfe enweghị ngosi ma ọ bụ miscommunication.
N'ihi na web mmepe na experimentation na peeji nke. Awesome maka anwale obere ibe n'ibe nke koodu nakwa dị ka debugging peeji nke.
Awesome n'ihi eme nchọgharị kpọmkwem peeji site kpọmkwem zighachi akwụkwọ nnọchiteanya sava. This is useful for when some sites are blocked or there is breakage for in a Transparent Proxy server. 🙂
M jiri nke a iji ụzọ ụfọdụ okporo ụzọ n'elu zighachi akwụkwọ nnọchiteanya sava na m ga kama na-aga site na ndabara ụzọ gasị. Ọ dịkwa nnọọ mgbanwe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe karịrị otu zighachi akwụkwọ nnọchiteanya nkesa dị ka onye ị na-emekarị na-eji na mberede na-aga na ntabi, dị nnọọ ịgbanwee n'elu ka etienede. 🙂
Greasemonkey agbakwụnye mgbanwe. There are many available scripts online to customise pages.
NoScript bụ egwu na igbochi Mgbasaozi. Ya a obere iwe na mbụ ebe ọ bụ na ị ga-whitelist niile saịtị na-amasị gị – ma n'ikpeazụ, ọ dị oké ọnụ ahịa ya. 🙂
-akpọlite ​​Pages – 10/10
Nnọọ uru n'ihi na ọ bụrụ na ị na-agagharị na-a na saịtị ma ọ dịịrị ala. Ọ bụrụ na saịtị bụ static-content na-edebere ndị ahụ a na-eme ka ọ dị mfe ngwa ngwa ahụ na ọdịnaya ma ọ bụrụ na ya cached online.
Screengrab bụ a dị mfe screenshot Adon na Imea nke grabs a screenshot nke dum web page ị na-elele, ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ buru ibu karịa gị na ihuenyo size. M ukwuu n'ime iji ya mere na m na-enweghị ka ubi nseta ihuenyo mgbe e mesịrị na.
E nwere ihe hell na-aga site na-enweghị a plugin ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe a server. M na-eji nwere ike ime nke a mgbe niile.
Awesome tab management n'ihi na ọ bụrụ na i nwere ihe karịrị 7-ma ọ bụ-otú taabụ.
Video DownloadHelper anya maka nkwanye media – kpọmkwem achọ ọ bụla buru ibu ọdịnaya a na-ebudatara. Mgbe ị pịa akara ngosi, ọ na-egosi gị ihe ugbu a na-na nbudata iyi na-enye gị nhọrọ ndị kwụ n'ahịrị na ya dị ka a “nkịtị” download.
Ebe ọ bụ na ị dịghị mgbe mara ma ọ bụrụ FF na-aga ugboelu ma ọ bụ ike na-aga bee, Ka amasị m na-azọpụta a oyiri m na desktọọpụ na m nwere ike mgbe ahụ na-ele video na-enweghị na-eji ọzọ bandwit ibudata video ọzọ. Ọzọkwa, nọ ọrụ, mgbe ndị mmadụ hapụ m ka m njikọ youtube ma ọ bụ ndị ọzọ na media, M na-emekarị emekpala ekiri ruo ọtụtụ mgbe – na m na-atụrụ ndụ ma ọ bụ n'oge nkwụsịtụ.